Dumarkee ugu cambar macaan xagga raaxada sariirta | shumis.net
Home » galmada » Dumarkee ugu cambar macaan xagga raaxada sariirta
Dumarkee ugu cambar macaan xagga raaxada sariirta
Is fahanka galmada ee labada lamaane ayaa ah as-aaska guurka guuleysta , si loo gaaro ujeedkaasi waxaa muhiim ah in uu jiro xariir wanaagsan xiliga galmada iyo in si cad ah la isugu sheego waxa ay labada lamaane dareemayaan xiliga cayaarta socoto .
Waxa ayna tani keeneysaa in in labadaba ay gartaan waxa midka kale raaxo uu ka helayo isla markaana kaga boganayo illaa uu ka gaaro heerka gariirka galmada .
Balse waxaa jira haween badan oo dareemaya xiliga cayaarta naxariista xanbaarsan socoto in aysan ninkooda kula xariiri karin hadal , inta badanna xishooda ama ka cabsada in ninkooda fikir qaldan ka qaato .
Ragga ayaa dareema kacsi marka uu si saraaxad leh u ogaado waxa ay lamaantiisa dooneyso , waxaana haweeneyda la gudboon in ay ogaato in ay xaq u leedahay in ay ninkeeda u sheegto sida iyo habka ay raaxada ku heli karto si uu ugu sameeyo .
Is fahanka sariirta oo la isu sheegto qofba sida uu
macaanka galmada ku heli karo ayaa keenta in labada lamaane dareemaan dharag galmo oo ay raali isaga
Title: Dumarkee ugu cambar macaan xagga raaxada sariirta
Posted by Unknown, Published at September 02, 2017 and have 0 comments